Musharaxiinta ugu horeeya ee la filaayo iney ku guuleystaan Jagada Madaxtinimada Dalka Somalia – idalenews.com
Warar aan ka helayno ilo muhiim ah oo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in 3da musharax ee kala ah:
1. Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynihii waqtigiisa dhamaadey
2. Dr. Abdiweli Maxamed Cali, Ra’iisul Wasaarihii Xiligiisu dhamaadey
3. Xasan Sheekh Maxamuud
yihiin musharaxiinta ugu cad cad ee la filaayo iney ku guuleystaan xilka ugu sareeya ee hogaanka Soomaaliya.
Xildhibaanada badidood ayaa la sheegayaa iney ku kala jabeen 3daas musharax oo la sheegey inuu mid kastaa haysto kalsoonida xildhibaanada qaar, mid ka mid ahna musharaxiintaas 3da ah noqon karo madaxweynaha Soomaaliya.
Isbedel weyn ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho ka dib markii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed & Ra’iisul Wasaare Abdiwali ay dalka dib ugu soo laabteen maalin ka hor. iyadoo loolanka siyaasada ee 3daas musharax ay la soo baxeen wax weyn ka bedelay xaalada siyaasadeed iyo saadaasha dadweynuhu qabeen oo aheyd in musharaxiinta Dr. Abdiraxmaan Baadiyoow, Abdullahi Axmed Adoow, Maxamed Abdullahi Farmaajo iyo Abdiwali yihiin musharaxiinta ee ugu horeeya tartanka, balse arrintaas ay wax weyn iska bedeshey.
Bishaan September 10keeda ayaa la filaayaa in la qabto doorashada Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana markastaa la filan karaa saadaal ka duwan tan hadda jirta, siyaasiyiintuna yihiin sidii mowjada hadda meesha ay dantooda ka arkaan u wareega.
Dadweynaha Soomaaliyeed ayaa u arka in dalku u baahan yahay hogaan si daacad ah ugu adeega dalka iyo dadka Soomaaliyeed, isla markaasna ka hortaga musuqmaasuqa iyo cadaalad darada dalka in muddo ah ku soo jirey.
Xafiiska Warqabadka Idale News Muqdisho.
Prof Xasan Sheekh Maxamuud oo safka hore ee doorashada Madaxweynaha hal mar ka soo muuqdey